March 4, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Wasiirka Difaaca DF Somalia, Muqdisho Weeraro Cusub Ayaa Ku Soo Socdo?
Posted on March 4, 2018 by Queen Kiin
Wasiirka Difaaca dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa uu sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro cusub. Wasiirka ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay ka hortaggaan weerar kaste oo Shabaab kaga yimaada. Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in Shabaab ay waddaan qorshayaan cusub oo ka dhan ah dowladda , islamarkaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonaayo in ay la yimaadaan qorshe…
Ciidamo Awood Kula Wareegay Xarumo Muhiim u Ah Puntland
Askar ka tirsan Ciidanka Birmadka maamulka Puntland ayaa saaka la wareegay xarunta Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga magaalada Qardho sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. Maamulka degmada Qardho ayaa xaqiijiyay in ciidamada ay Albaabada u laabeen xarunta Wasaaradda Maaliyadda. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in Wasaaradda Maaliyadda Puntland Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay in aysan siin wax Mushaar ah. Waxa ay sheegeen in ay gacanta kusii heyn doonaan Bankiga iyo Wasaaradda maaliyadda tan iyo…
Fadeexad: Dowlad Aan La Fileyn Oo Hub Iyo Qarash Badan Siisay Al-shabaab.
Posted on March 4, 2018 March 7, 2018 by Queen Kiin
Mid kamid ah dowladaha carbeed ayaa waxay malaayiin doolar iyo sidoo kale hub ay siisay maleeshiyada Al-shabaab, sidaan ku helnay xoghoose. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay horraantii sanadkan 2018 in ay hub farobadan kasoo dejisay gobolka Shabellaha Hoose, waliba si qarsoodi ah iyo sidoo kale lacag dhan 10 Milyan oo doolar. Hubkan iyo lacagtaan ayaa waxay ku wareejisay dagaalyahannada Al-shabaab, Ulajeedka ayaa ah oo kaliya sida naloo sheegay in ay xoojiyaan dagaallada ka dhanka…
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa xirnaa qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana arintaasi dhibaato kala kulmay shacabka oo garan waayay sababaha wadooyinka looga xiray. Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo caawa Warbaahinta Shir jaraa’id u qabtay ayaa ka hadlay sababihii loo xiray qaar kamid ah Wadooyinka Muqdisho. Waxa uu Gudoomiyaha gobolka ka raali galiyay shacabka Muqdisho maalmihii koobnaa ee la xiray Wadooyinka qaar, waxa…